Qof kasta oo xiiseynaya in uu duulo serverkeyga oo isticmaalaya JoinFS iyo LOTS of AI ???
Su'aal Qof kasta oo xiiseynaya in uu duulo serverkeyga oo isticmaalaya JoinFS iyo LOTS of AI ???
Bilood 10 2 maalmood ka hor #900 by fltbuff71
Fiiri bogga fsxflywithmanyai.weebly.com faahfaahinta
Waxay diyaarin doontaa duulimaad kooxeed mustaqbalka dhow haddii dulsaar ku filan.
Ma u duuli karin AI in badan oo ku shaqeynaya qolka, laakiin JoinFS waa mid aad u weyn waxaadna duuli kartaa Steam, Box, ama wixii kale ee duulimaad ah ee duulimaadka.
Ma isticmaali doono TeamSpeak waxayna u egtahay inay lacag ujoogaan server hadda.
Haddii aad xiisaynayso, i ogow
Eeg pics-ku ku lifaaqan aniga oo la xariira Qorshaha Ai Flight Planner. .my server, iyo JoinFS
bilood 9 22 hours ago #996 by fltbuff71
Waxaan ku darayaa DISCORD
raadinta wax xiiso ah oo igu soo biiraya meeshan oo ku yaala koox ka mid ah MARCH 2018 group, oo leh diyaarado badan oo AI ah, naftaada, iyo adigoo isticmaalaya DISCORD ???????
Bilood 8 4 todobaad ka hor #1003 by fltbuff71
SIDA AAD U DARO
Bilood 8 3 todobaad ka hor #1007 by fltbuff71
Time si ay u abuuraan page: seconds 2.237